Farmaajo oo u sheegay beelaha degan Muqadisho in dhibka ka jira caasimadda uu mas’uul ka yahay Kheyre! (Xog) | SMC
Home WARARKA MAANTA Farmaajo oo u sheegay beelaha degan Muqadisho in dhibka ka jira caasimadda...
Farmaajo oo u sheegay beelaha degan Muqadisho in dhibka ka jira caasimadda uu mas’uul ka yahay Kheyre! (Xog)
Kulan uu shalay MW Farmaajo la qaatay odoyaasha dhaqanka ee beesha Habargedir ayuu ku sheegay in dhibaatada ka jira Magaalada Muqadishu uusan isagu wax shaqo ah ku lahaynin. Farmaajo oo ka jawaabayay eedeyn ay u soo jeediyeen odoyaasha dhaqanka taas oo ahayd inuu isaga soo amray dagaalka lagu qaaday shacabka ku dhaqan Koonfurta Magaalada Muqadishu ayuu yiri “…aniga ma soo amrin, ma aqaan meesha laga soo amray, anigana raali kama ihi weerar nocaas ah, dad kale oo dano kale leh ayaa arintaas ka danbeeyay”.
Hadalka Farmaajo ayaa fajac ku noqday odoyaashii la kulmay Farmaajo. Waxa ay isweydiiyeen sidee bay suuragal ku tahay in Farmaajo uusan la socon dhibkii loo gaystay dadka ku dhaqan koonfurta Muqadishu?.
Odoyaasha Dhaqanka ayaa hadalka ka soo yeeray Farmaajo u arkay in uu yahay mid uu eeda dusha ka saarayo Xassan Cali Kheyre madaama ciidanka weerarka soo qaaday ay hoos yimaadaan Xassan Kheyre.
Xassan Kheyre ayaan marnaba ka hadlin dagaalka gardarada ah ee lagu soo qaaday dadka shacabka ah taas oo u muuqato in ay cadayn u tahay in Xassan Kheyre mas’uul ka yahay jariimada loo gaystay dad shacab ah.
Waa markii u horeeysay uu Farmaajo si toos ah farta ugu fiiqo Xassan Kheye kuna eedeeyo in uu dagaal ka dhex oogayo beelaha ku dhaqan Magaalada Muqadishu. Xildhibaan Axmad Fiqi oo horay uga hadalay idaacadaha Muqadishu ayaa ku tilmaamay Xassan Kheyre in uu yahay aalad loo isticmaalo dadka reer Muqadishu kaas oo fuliya qorshaha uu Farmaajo ku beegsanayo dadka Muqadishu.
Previous articleFarmaajo oo maanta wajigabax kala kulmay Beesha Habargedir: Maxaa ka soo baxay kulankii maanta? (Warbixin Buuxda)
Next articleDil goordhaw ka dhacay Demada Wanlaweyn iyo Faah faahino kasoo baxaya